Tag: filankevitra cmo | Martech Zone
Tag: filankevitra cmo
Ny Lehiben'ny Chief Marketing Officer (CMO) dia nanangana fandinihana vaovao mifototra amin'ny fomba ahafahan'ny marketing mamokatra amin'ny fomba mandaitra kokoa ny fitarihana varotra mahay amin'ny alàlan'ny atiny fitarihana eritreritra mahery vaika - asa iray izay voaporofo fa tolona ho an'ny mpivarotra ankehitriny. Raha ny marina dia 12% monja amin'ireo mpivarotra no mino fa manana motera marketing atiny avo lenta izy ireo izay voalamina amin'ny fomba stratejika mba hikendrena ireo mpihaino marina miaraka amin'ny atiny maharesy lahatra. Ireo tsy fahombiazana ambony izay misy fiatraikany amin'ny isan'ny fisintomana
Mametraka ny CMO anao amin'ny saram-pandraharahana haitao ara-barotra!
Alarobia, Oktobra 22, 2014 Alarobia, Oktobra 22, 2014 Douglas Karr
Fandinihana vaovao nataon'ny talen'ny Chief Marketing Officer (CMO) sy Tealium izay mampiseho fa ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa ara-barotra sy ny varotra dia mifandray mivantana amin'ny fananana tondrozotra ara-dalàna amin'ny fitantanana teknolojia marketing nomerika sy fampidirana ireo angon-drakitra novokarina tamin'ny fampitomboana ny lafiny mpanjifa. Entitled Quantify How Well You Unify, ny tatitra vaovao dia manadihady ny ambaratonga izay lehiben'ny mpivarotra dia manangana ny paikadin'ny teknolojia marketing dizitaly ary mampivondrona sy mamoaka sanda amin'ny fampitomboana loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa. Anisan'ireo
Tsy maninona na mampiasa maso ivoho marketing mailaka na talenta an-trano; ity torolàlana ity dia hanampy anao hanombatombana ny ezaka ataonao ankehitriny ary hahazo lanja bebe kokoa amin'ny marketing amin'ny mailakao.